Moments leh saaxiibo 40
Sidee xayawaannada xayawaanku u noolaadaan iyagoo aan cunto lahayn oo aan muuqan hawo la'aan inta lagu jiro muddada dheer ee suunka?
Noolaha xayawaanku ma noolaan karo cunto la'aan. Baahida iyo howlaha noolaha ayaa go'aamiya nooca cuntada loo baahan yahay. Xayawaanka xijaabku ma noolaadaan bilaa cunto la'aan badana hawo la'aan, in kasta oo aysan muhiim ahayn iyaga inay ku qaataan cuntada qaybaha dheefshiidka si ay u sii noolaadaan inta lagu gudajiro xilliga isu-soo-baxa. Xayawaannada xayawaannada leh sambabbada ayaa badanaa neefsada, laakiin u-jeedooyinkoodu kuma filna oo keliya inay jidhkooda ku xidhaan la-socodka noloshooda oo aad u hooseeya si xawligu u muuqdo in xayawaanku aysan haba yaraatee neefsan.
Noocyada xayawaanka iyo caadooyinkooda waxaa loo habeeyaa iyadoo la raacayo qawaaniinta dhaqaalaha qaarkood ee dabeecadda ee loogu talagalay dhowrista xayawaannada dabeecadda. Cunnadu waxay lagama maarmaan u tahay dayactirka dhisme kasta oo jidhka ah, iyo ilbaxnimooyinka dadku ayaa ka dhigtay inay lagama maarmaan tahay isaga oo ah kala-goysyada cuntada lagu qaadanayo inay ahaato muddo gaaban. Ninkii caadeystay seddexdiisa ama in kabadan oo cunno ah ma fahmi karo ama uma mahadnaqayo sida ay tahay in xayawaanku tegi karaan maalmo ama toddobaadyo la'aan cunno, iyo in qaar ay ku noolaan karaan xilliga qaboobaha iyagoon wax cunin. Xayawaanka ku nool dalkooda duurjoogta ah waxay u baahan yihiin cunto si aad ah uga yar dadka. Cuntada ay cunaan xayawaanka dabiiciga ahi waa in ay soo bandhigaan baahidooda sidaas oo kalena waa in qofka cuntada cunaa uu siiyaa baahiyadiisa jir ahaaneed.
Laakiin cuntada dadku waa inay sidoo kale siisaa tamar looga baahan yahay waxqabadka maskaxda iyo wuxuu doonayo. Marka loo eego dhaqaalaha dabiiciga, cuntada uu cuno ninku waxay kordhineysaa kaydkiisa tamarta waxayna ku dari doontaa awooddiisa. Badanaa wuxuu tamartiisa ku daraa waxyaabo badan oo raaxo leh. Waxa in ka badan oo ku filan oo xayawaanku cuno si ay u siiso baahiyaheeda jira waxaa lagu kaydiyaa jidhkeeda sida tamar aad u badan, taasina waxay ku keentaa marka bixinta cuntada aysan ku filnayn baahiyaheeda.
Sida xilliyada qaboobaha, xayawaanada hibernate waxay kordhaan dufanka waxayna diyaar u yihiin inay bilaabaan hurdadooda qaboobaha. Qabowgu wuxuu gooyaa cuntadooda, wuxuu dhulka qaboojiyaa oo wuxuu geliyaa godadkooda. Kadibna waxay isku xiraan ama isku laabaan booska sida ugu fiican u ilaaliya kuleylkooda kana ilaaliya qabowga. Neefsashada ayaa hoos u dhacda, tirada iyo dhererka dib u soo kicinta ayaa loo habeeyay illaa xaddiga shidaalka ee lagama maarmaanka u ah ololka nolosha. Cuntada loo isticmaalay hadda maahan waxqabadka muruqyada, laakiin waa in lasiiyaa xubinka tamar looga baahan yahay si ay u sii waddo, iyada oo ay u dheertahay muddada dheer ee hurdo la'aanta iyo hurdada. Cunnadan ama shidaalkani waa tamarta dheeraadka ah ee jidhkeeda ku kaydisay qaab dufan ah oo la soo jiito inta lagu gudajiro xilliga jimicsiga iyada oo loo eegayo baahida jidhka.
Sida dhulku u janjeero qorraxda, shucaaca qorraxda, halkii uu indhaha ka fiirin lahaa dusha dhulka sida jiilaalka, hadda si toos ah ayuu dhulka ugu dhufanayaa, kordhiyaa hawo-magnetic oo wuxuu bilaabaa badqabta iyo socodka nolosha geedaha. Saamaynta qorraxda ayaa sidoo kale ka soo kicisa xayawaannada isku wareegaya hurdadooda, midkastaba sida ay tahay dabeecadiisa, iyo sida ay u tahay cunnadiisa oo ay qorraxda diyaarsato.
Wareegga dhiigga ayaa ka dhigaya neefsashada mid lama huraan ah iyadoo loo eegayo oksijiinta uu dhiigga u baahan yahay iyo taasoo ka timaadda sambabka. Neefsashada oo kordha ayaa sababa wareegga dhiigga oo kordha. Wareegga dhiigga ayaa u shaqeynaya sida neefsashadu u deg deg tahay oo qoto dheer. Firfircoonaanta jidhka ayaa dhiigga ka dhigaysa mid firfircoon oo wareegga firfircoon wuxuu kordhiyaa tirada waxyaalaha loo qoro, dhammaantoodna waxay isticmaalaan tamarta ay cuntada siiso. Firfircoonida xayawaanku waxay yareysaa wareegeeda. Xayawaanka hibernating socodka wareegga ayaa hoos u dhaca ugu yar oo neefsashadeedu way adag tahay haddiiba la arki karo. Laakiin waxaa jira xayawaan ay ku joogsadaan wareegga iyo neefsashada oo ay shaqooyinka xubnaha jirkooda ku xayiran yihiin.
Xayawaanku sanbabada ma noolaan karaa isagoo aan neefsanayn? Hadday sidaas tahay, sidee bay u nool yihiin?
Xayawaanka qaarkood ee qaba sambabaha ayaa ku nool iyaga oo aan neef qaadin. Xayawaannada noocan oo kale ah waxay sii noolaadaan iyagoo xayiraya howlaha xubnaha ka mid ah ee u baahan cunno iyo inay la xiriiraan mabaadi'da firfircoon ee ku dhex jirta mabda'a nolosha, badda aan la arki karin oo aan la fahmi karin ee nolosha, iyada oo loo marayo isku-dubbarideynta mabda'a qaab dhismeedka jirkeeda. jirka. Niyad jab haddii hal sano oo sanad ah ay dhacdo in wargeysyadu aysan bixin xaqiiqooyin la xiriira soo helitaanka xayawaan ku noolaa muddo aad u weyn oo aan suurtagal ahayn neefsashada. Badanaa qoraaga maqaalka waa kan markii ugu horeysay maqlay xaqiiqada sida tan uu qoro, waxaana loo badinayaa inuu ku qeexi doono inuu yahay kiiskii ugu horeeyay noociisa ee la duubo. Xaqiiq ahaan, waxaa jira kiisas badan oo si habsami leh loo diiwaangeliyay, oo lagu qoray joornaalada sayniska sumcad ku leh. Aan bilo badan ka hor mid ka mid ah waraaqaha subaxa hore ayaa bixiyay xisaabinta daahfurka noocan oo kale ah. Qayb kamid ah sahamiyayaashu waxay raadinayeen muunado gaar ah oo ku saabsan danta sayniska. Waxay lahaayeen munaasabad ay ku jareen qayb dhagaxa ka mid ah. Mid ka mid ah googoyntooda dhagax weyn ayaa la furay oo shaaca ka qaaday toad kaas oo ku dheganaa bartaas adag. Markiiba tood waxay noqotay madaxa xiisaha. Intii ay fiirinaysay sidii ay u jiiftay qolkeedii yaraa ee dhagaxa ahaa halkaas oo qarniyo badan lagu xidhnaa, mid ka mid ah xafladda ayaa u jeexay si uu u arko bal in uu dab ka kacay, oo toadku dhammaantood wuu la yaabay iyaga oo ka soo boodaya xabaashiisii. Xubinka ka warbixiyay soo helitaankiisa ayaa sheegay inuu maqlay oo uu aqriyay kiisaska noocaas ah, laakiin uu waligiis shaki galiyey suurta galnimadooda ilaa uu ka arkay ifafaalaha. Wakhtigii warbixintu goluhu wuu noolaa oo wuu fiicnaa. Munaasabad kale ayaa laga soo wariyey shaqsiyaad sharaf leh in markii ay goynayaan xoogaa dhagax ah oo dhagax ku yaal ay ku taal biyo biyo duug ah, sidii dhagaxu u kala go'ay libaax ka soo baxay, oo la qabtay markii uu bilaabay inuu si caajisnimo ah u cararo.
Xayawaanka lagu helo iyagoo nool oo ku xidhan inta udhaxeysa dhagaxyada, ama ku dhegan dhagxan adag, ama geedo ku koray, ama ku aasay dhulka, waa xayawaan hibernate ah, laakiin sidoo kale joojin kara dhammaan howlaha dabiiciga ah iyagoo gooya hawada. isla markaana isla mar ahaanta u jaro xiriirkii jir ahaaneed ee la lahaa xarumo neerfayaal qaarkood oo ku dheji xiriiriyaha etheric. Tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo carrabku dib ugu rogayo cunaha oo uu carrabka ka buuxiyo marinka hawada. Carrabka ayaa dib ugu rogaya galmada oo joojiyaya dabayl ama trachea dhamaadka kore. Carrabku sidaas ayuu u adeegaa laba ujeedo. Waxay xiraysaa dabayshu, sidaa darteedna waxay ka hortageysaa marinka hawo-mareenka sambabbada, oo, sidaas awgeed, waxay sameyneysaa baytar kaas oo nolosha ay hadda ku socoto ay jidhka gasho illaa iyo inta wareeggu xiran yahay. Markay hawadu xidho sambabbada, dhiiga lama qaadi karo; oksijiinta dhiigga ayaa joogsata; haddii aan dhiig la keenin xubnahu ma qaban karaan howlahooda. Caadi ahaan xaaladahan dhimashadu waa ay ku xigtaa, sababta oo ah neefta hada jirta way jajaban tahay, halka neefta loo wado inay ku sii jeedo mashiinka nolosha ee nolosha. Laakiin haddii marka hawadu ka go'do sambabbada xiriir aad u khiyaano badan kan neefsashada ay ka dhexeyso jirka jirkiisa iyo badweynta nolosha, jirka jirku waa sii noolaan karaa illaa inta xiriirka nolosha la sameeyo jirka oo weli jira. xasilloon.
Ilaa inta carrabka lagu hayo booska lagu sharaxay, xayawaanku way noolaan doonaan; laakiin ma dhaqaaqi karo, maxaa yeelay neefsashada hawadu waxay lagama maarmaan u tahay dhaqdhaqaaqa jirka, mana neefsan karo intuu carrabkiisu joojinayo marinka hawadu. Markii carrabka laga saaro xiriiriyaha qulqulka nolosha jilicsan ayaa jaban, laakiin nolosha jidhka ee hadda jirta waxay ku bilaabataa wareegga neefsashada.
Marka laga tago xaqiiqada ah in toads iyo lizzz laga helay nolosha dhagax adag, mala awaal badan ayaa laga dhexjiray, sida ay tahay, aan wax looga qaban karin, ayay halkaas gaareen. Sida loo adeegsado toad ama lilac ayaa dhagax lagu geliyey, waxyaabaha soo socdaa waxay soo jeedin karaan laba ka mid ah qaabab badan oo suurtagal ah.
Markii xayawaan laga helo dhagax dhagax ku samays ah oo uu sameeyo wabiga wabiga, waxaa macquul ah in, inta lagu gudajiray dhaqdhaqaaq jireed, biyuhu way kaceen oo dabooleen iyo inay jiraan kayd biyo ka soo baxa hareeraha jirka xayawaanku iyo xidhay. Markii xayawaan laga helo dhagaxa asal ahaan ay ka soo jeedaan, waxaa suuragal ah in iyada oo jir ahaan ahaanteed ay jirto, ay ku taagneyd dariiqii oo ay ku daboolay durdur qabow oo dhagaxa dhalaalaya oo ka soo baxaya volcano. Diidmo ayaa laga dhigi karaa in toad ama li liyu uusan ku sii jiri doonin biyaha muddo ku filan oo ay ku dhici karto kaydiyayaal badan oo ay ku urursan karaan dhagax weyn, isla markaana aysan u adkaysan karin kuleylka iyo culayska dhagaxa dhalaalaya. Diidmadaasi waxay lumin doonaan muhiimada ay u leedahay qofka isha ku hayey caadooyinka toads iyo lizzz, marka uu dib u xusuusto kuleylka daran ee ay umuuqdaan inay jecelyihiin, iyo markii la fahmo in iyagoo jir ahaan murugsan oo xiriir la leh khiyaanada hadda. nolosha, waa kuwo aan la dafiri karin xaaladaha jirka iyo dareenka.
Sayidku ma aqoonsan karo sharci kasta oo uu ku noolaan karo iyada oo aan cunto iyo hawo lahayn; hadday sidaas tahay, haddaad dadka u noolaataan, oo sharcigu waa maxay?
Marka loo eego sayniska casriga ma jiro sharci noocan oo kale ah, maxaa yeelay sharci noocan oo kale ah looma yaqaan sayniska casriga ah. In ninku noolaan karo muddo dheer la'aantiis cunno iyo hawo hawleedna uusan qirin sayniska rasmiga ah. Ma jiro, sida cilmiga saynisku qabo, ma jiri karo sharci u saamaxa nin inuu ku noolaado bilaa cunno iyo hawo la'aan, caddeyn kasta ha noqotee, ilaa saynisku diyaariyo sharciga oo uu si rasmi ah u oggolaaday. Si kastaba ha noqotee, raggu waxay noolaayeen muddo dheer, bilaa cunto ah waxayna ka goosteen hawada, sida ay sheegeen goobjoogayaal lagu kalsoon yahay, iyo sida lagu naafeeyay diiwaannada dadweynaha. Gudaha Hindiya waxaa jira diiwaanno fara badan xilliyadan casriga ah, iyo xisaabaadka iyo halyeeyada oo dib u noqonaya qarniyo badan, oo ka mid ah yogis sababta oo ah dhaqamada qaarkood ayaa awood u yeeshay oo joojiyay howlihii jir ahaaneed ee ay hawada ku jireen muddo dheer. Ku dhawaad ​​Hindi kasta ayaa maqlay ama ka arkay waxqabadka noocaas ah. Mid ka mid ah koontada noocan oo kale ah ayaa caawin doonta si loo muujiyo
Si loo caddeeyo in ninku heli karo awoodo aan caadi ahayn oo inta badan loo arkaa wax aan macquul ahayn, ayaa yogi yogi ah oo Hindi ah uu u soo bandhigay in uu u muujiyo qaar ka mid ah saraakiisha Ingiriiska in uu noolaan karo muddo dheer oo aan cunto iyo hawo toona lahayn. Ingriiska waxay soo jeediyeen shuruudo imtixaan, oo la aqbalay, in la fahmay hase yeeshe majiro wax aan ka aheyn yoga chelas, xertii, inay u diyaariyaan dhibaatadan oo ay daryeelaan wixii ka dambeeya. Waqtiga loo ballamay kulan ballaaran oo dad ah ayaa isugu yimid si ay u markhaati furaan waxa yaabka leh ee la qaban doono. Ay hareereeyeen dhagaystayaashiisa waaweyn, yogi wuxuu fadhiyay intii laga fiirsanayay ilaa xertiisii ​​isaga joogtay ay arkeen isbedel gaar ah oo isaga ku soo dhacaya. Dabadeed waxay dhejiska dul saareen gogol kor ah oo dabool leh, isla markaana waxay ku dhejiyeen jaakad lagu hago. Daboolkii naxashka ayaa la geliyey oo si dabiici ah loo xidhay oo dhulka hoostiisa loogu soo tuuray lix fiid. Dhulkii ayaa lagu tuuray sanduuqa, oo doog baa lagu dhex beeray. Askarta ayaa ilaalin joogta ah goobta ka haysay, taas oo iyaduna ahayd goob soo jiidasho leh booqdayaasha. Bilo ayaa soo maray, cawsku wuxuu ku koray caws culus. Waqtiga lagu heshiiyey dhammaan dhinacyada ay quseyso ayaa goob joog ahaa, dhagaystayaashuna wey badnaayeen, maadaama wararka yaabka leh ay si aad ah ugu faafay. Cawska si taxaddar leh ayaa loo baaray iyadoo lagu qanco. Suulkii waa la jaray waana laga saaray, dhulkii ayaa furmay, busteedii ledhka ayaa kor loo qaaday, shaabadihiina way jabeen oo daboolkii ayaa laga saaray, Yogi ayaa la arkay isagoo jiifa sidii la dhigay. Isaga ayaa si xushmad leh looga saaray. Xertiisii ​​waxay xireen addimmadiisa, indhihiisii ​​iyo indhooladihiina way kala bixiyeen, carrabkiisiina way jiiteen oo carrabkiisa maydheen. Si dhakhso ah ayaa neefsashada loo bilaabay, garaaca garaaca wadnaha, cod ka soo baxay hunguriga Yogi, indhihiisu ay duulleen oo ay fureen wuuna fadhiistay oo hadlay. Farqiga kaliya ee Yogi wuxuu ahaa inuu u muuqday mid ka xoog roon marka loo eego waqtiga faragelinta iyo aasitaanka. Kiiskan waxaa lagu duubay mid ka mid ah warbixinnada dowladda.
Kuwa sheegta inay yaqaaneen waxqabadka lagama maarmaanka u ah inay galaan xaaladaha noocaas ah ee riyada, waxay sheegaan in Yogis ay isu diyaariyaan jimicsiyo neefsashada qaarkood iyo daaweyn gaar ah oo ah afka iyo cunaha. Waxaa iyaga sheegay oo sidoo kale lagu sheegay buugaag ku saabsan mowduuca "Yoga," in laga fiirsado iyo jimicsi xagga neefsashada, neefsashada iyo xajinta neefsashada, qalliinka xubnaha jirka ayaa laga yaabaa in la hakiyo oo jirka uu weli nool yahay . Waxaa loo sheegay inay lama huraan u tahay qof gala aragti dheer inuu awoodo inuu carrabkiisa dib ugu celiyo cunaha. Si tan looga dhigo mid jir ahaan ah, waxaa la sheeganayaa in isku xirka u dhexeeya daanka hoose iyo carrabka in la jaro ama la xiro. Markaa waxay noqonaysaa Yogi inuu jiido - ama waxa loo yaqaan "caano" - carrabkiisa si loogu dhejiyo dhererka looga baahan yahay qalliinka. Macallinkiisii ​​ayaa tusay sida.
Haddii nooca Yogis noocaas ahi ay barteen inay ku daydaan xayawaanka isu-gudbinta xayawaanka isla markaana ay ku daydaan duruufaha dabiiciga ah ee xayawaannada qaarkood, si kastaba ha noqotee shuruudaha iyo hawluhu waa isku mid yihiin, in kasta oo Yogi uu ka maqan yahay hadiyadda dabiiciga ah ee uu ku helo iyada oo la adeegsanayo, ama qaab aan dabiici ahayn. Carrabka / luqunta carrabka ama liifku uma baahna wax qalliin ah oo dherer ah, ama xayawaannadani uma baahna layliyada neefsashada si ay ugu xidhaan socodka nolosha ee gudaha. Xilliga iyo meesha ayaa go'aaminaya goorta laga soo gali doono. Waxa xayawaanku ku sameyn karo hadiyad dabiici ah, ninku sidoo kale wuxuu baran karaa inuu sameeyo. Farqiga u dhexeeya ayaa ah in ninku maskaxda ku hayo, waxa uu ka maqan yahay dabeecadda.
Si uu qofku u noolaado isaga oo aan neef qaadin waa inuu ku xidhaa neefsigiisa maskaxda. Markuu neefsanayo maskaxdiisa neefsashadeeduna joogsato. Neefsashada neefta waxaa mararka qaarkood si ula kac ah ugula yimaada dabeecad maskaxeed ama khalkhal, ama waxaa sababi kara magnetism ama maskaxda qof kale, sida soojiidasho qoto dheer ama aragti hypnotic. Markii nin, isaga iskiis u raadsado, uu u gudbo gobolka uu ku nool yahay isaga oo aan neef qaadin ayuu sidaa sameeyaa qaar ka mid ah jimicsiga jirka iyo neefsashada sida lagu sharraxay ama, marka laga reebo neefsashada dabiiciga ah, iyada oo aan wax dhaqdhaqaaq jidh ahaaneed lahayn. Marka ugu horeysa ee uu xiriir la yeesho neefsashadiisa maskax ahaaneed ee jirkiisa jir ahaaneed ee hoose. Xaaladda labaad wuxuu la xidhiidhaa neefsashadiisa maskax ahaaneed jir ahaan maskaxdiisa kore. Qaabka koowaad waa habka dareenka, tan labaadna waa maskaxda. Habka koowaad wuxuu ubaahanyahay hormarinta dareenka gudaha, habka labaad waxaa la sameeyaa marka qofku barto sida loogu isticmaalo maskaxdiisa si xikmad leh, madaxbanaanida dareenkiisa.
Darajooyin badan oo maaddo ah iyo in kabadan hal jirka ayaa gala dhismaha nin. Mid kasta oo ka mid ah jirkiisa ama heerkiisa arrinta waxa laga siiyaa adduunka ay ka tirsan tahay. Laakiin sahayda ugu weyn ee nolosha waa mid kamid ah xubnaha u gudbiya nolosha kuwa kale. Marka sahayda nolosha lagu qaado jir ahaaneed ayaa la adeegsadaa loona gudbiyaa maskaxda. Marka sahayda ugu weyni ay ka timaado xagga maskaxda waxay u gudbaysaa oo sii noolaanaysaa jidhka. Sharciga ayaa ah in qofku jidhkiisa ku hayn karo neefta uu awood u siin karo.